sajhasexy 2514 days ago
bokaman 2514 days ago
magorkhe1 2514 days ago
instagram 2514 days ago
Visitor from US is reading need help yaar
Visitor from DE is reading News Summary from Nepal for Wednesday, August 4, 2021
Visitor from SG is reading Evergreen Beauty Queen, Aishwarya.
Visitor from SG is reading 1st Nepali NASA scientist
Visitor from US is reading Old English 800 corona mask please use it safely
Posted on 03-03-15 10:48 PM Reply [Subscribe]
काठमाडौं,फागुन २० – टर्कीस एयरको बिमान बुधबार बिहान काठमाडौंमा दुर्घटना भएको छ । ईस्तानबुलबाट काठमाडौंका लागि उडेको विमान बुधबार बिहान ७ः४० बजे विभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा दुर्घटना भएको हो ।
अवतरणका क्रममा दुर्घटना भएकाले कुनै मानवीय क्षति भने नभएको त्रिभुवन विमानस्थल स्रोतले जानकारी दिएको छ । विमानमा २२७ यात्रु सवार थिए । उनीहरु मध्ये ४ जना सामान्य घाइते भए पनि अन्य सकुशल रहेको त्रिभुवन विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रवन्धक पूर्ण चुडालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
चुडालका अनुसार विमान रन वेमा अवतरण गर्ने क्रममा अनियन्त्रित भएर दुर्घटना हुन पुगेको थियो ।
विमान दुर्घटनाको खास कारण अहिलेसम्म पत्ता नलागेको र यसबारे छानविन भइरहेको पनि चुडालले जानकारी दिए ।
विमान पहिलो पटक अवतरण गर्ने प्रयास विफल भएपछि दुर्घटना भएको हो ।
विमानले ७ बजे अवतरण गर्ने समय भए पनि अवतरण गर्न नसकेपछि विमान अवतरणको दोस्रो प्रयासका क्रममा दुर्घटना हुन पुगेको पनि प्रवन्धक चुडालले जानकारी दिए । विमानले दोस्रो पटक ७ः४० मा अवतरणको प्रयास गरेको थियो ।
दुर्घटनापछि अहिले विमानस्थलमा सबै उडान बन्द गरिएको छ।
तस्बिरः सौजन्य दीकेस मलहोत्राको फेसबुकबाट
- See more at: http://www.ratopati.com/2015/03/04/213761.html#sthash.3LXz2Pm0.dpuf
Posted on 03-04-15 9:50 AM [Snapshot: 268] Reply [Subscribe]
Last edited: 19-Mar-15 02:12 PM
Posted on 03-04-15 9:57 AM [Snapshot: 277] Reply [Subscribe]
आशिष्मीको टट्टीमा चिप्लेर दुर्घटना भयको हो
Posted on 03-04-15 10:07 AM [Snapshot: 304] Reply [Subscribe]
धन्न खाते र्किस लेखेनछ !!!
बिज्ञापन गर्न भ्याएछ |
एस्तो हुनुमा सत्तासिन हरुको गल्ति देखाउनु पर्ने तर कट र पेस्ट भएकोले यी सब्द हरु यो बिज्ञापनमा परेनन् ?
Last edited: 04-Mar-15 02:18 PM
Posted on 03-04-15 10:25 AM [Snapshot: 342] Reply [Subscribe]
मैले सुनेको अस्ति भर्खर त्यों बाबुराम भन्ने अलच्छिनी तेइ एअरपोर्ट बाट उड्या थियो रे तेस्कै कारण ले होला ।